Mpanamboatra fenitra eropeana - Shina fananganana orinasa & mpamatsy fenitra eropeana any Chine
Suisikan'ny eoropeana sy sakana. Kalitao ambony ary miaraka amin'ny CE, TUV, fanamarinana NF, ny garantiana dia 10 taona Ny takelaka fidirana an'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC ary ny vy amin'ny zinc. Ity andiam-pampianarana avo lenta ity dia mety mahafeno ny fepetra takinao rehetra. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny kitranan-boloky dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara sy las ...
Nova Eropeana (Plastika)
Suisikan'ny eoropeana sy sakana. Kalitao ambony ary miaraka amin'ny CE, TUV, fanamarinana NF, ny garantiana dia 10 taona Ny takelaka voalohan'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC sy ny fitaratra fitaratra. Ny firafitry ny modular, DIY, mora apetraka. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny kitranan-boloky dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara ary maharitra elasticit ...
Suisikan'ny eoropeana sy sakana. Kalitao ambony ary miaraka amin'ny CE, TUV, fanamarinana NF, ny garantiana dia 10 taona Ny takelaka voalohan'ity andiany ity dia vita amin'ny fitaovana ambony indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana PC sy ny fitaratra fitaratra. Ny akorany dia vita amin'ny metaly. Ireo fifandraisana mifamadika dia vita amin'ny fitaovana alloy volafotsy avo lenta. Mihoatra ny 40000 ny fandidiana an-toerana. Ny takelaka fantsona dia vita amin'ny varahina phosphor, izay manana toetran'ny fitondran-jiro elektrika tsara ary elasticity maharitra. Ny plu ...
Ny fahazavana eoropeana